नेपालको आर्थिक विकासमा भारतको भूमिका छ : विश्व बैंक
प्रकाशित मिति: 2017/05/24
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक विकासमा भारत साधक र बाधक दुबै बन्न सक्ने बताएको छ । विश्व बैंकले मंगलबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको मध्यम आय तर्फ नेपाल नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक विकासमा भारत साधक र बाधक दुबै बन्न सक्ने उल्लेख गरेको हो ।
विश्व बैंकले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनको मुख्य सारांशमै नेपालको आर्थिक विकासमा भारतको भूमिका समेटिएको टिप्पणीलाई समावेश गरेको छ । ‘नेपाल बिशेष ढंगले भारत प्रति खुल्ला छ र यसको आर्थिक विकासका पाइला पनि सकारात्मक र नकारात्मक रुपले भारत प्रति नै निर्भर छन’, विश्व बैंकको रिपोर्टमा भनिएको छ ।
अर्थ विद डा. पोषराज पाण्डेले विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालको वास्तविकता उजागर गरिएको टिप्पणी गरे । उनले नेपालको आर्थिक विकासमा भारतको ठुलो योगदान रहने र उसले नचाहाँदा नेपालको आर्थिक विकासको गतिमा सुस्तता आउन सक्ने बताए । ‘नेपाल र भारतको मुद्रा सटही दर स्थिर छ, वैदेशिक व्यापारको हिस्सा पनि ठुलो छ, आपसी सहयोग पनि उस्तै छ, नेपालको विकासमा साधक बन्न सक्छ’, डा. पाण्डेले भने । उनले नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको र भारत तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा प्रवेश गर्न सहज भएकाले उसको असहयोगमा नेपाललाई अप्ठेरो पर्ने बताए ।
अर्का अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पनि नेपाल भुपरिवेष्ठित मुलुक भएको र तीन तर्फ भारतसँग सिमा जोडिएकाले नेपालको आर्थिक विकासमा भारतको योगदान हुनु स्वभाविक रहेको बताए । उनले पनि जसले विकासमा सहयोग गर्न सक्छ उसले नचाहाँदा विकास रोक्न पनि सक्ने तथ्यलाई भुल्न नहुने उनको भनाई छ । ‘भारतसँग हाम्रो ठुलो परनिर्भरता छ, ठुलो वैदेशिक व्यापार पनि छ, भारतले चाहदाँ हाम्रो विकासको गति बढ्न सक्छ र उसले नचाहाँदा गति घट्न पनि सक्छ’, उनले भने । भारतले नाका बन्दी गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावहरुलाई हेर्दा पनि नेपालको आर्थिक विकासमा भारतको सहयोग र असहयोगको भूमिका स्पष्ट हुन्छ ।